UK: Weerar mindi loo adeegsaday oo 3 qof lagu dilay. - NorSom News
UK: Weerar mindi loo adeegsaday oo 3 qof lagu dilay.
Saddex qof ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen, weerar mindi loo adeegsaday oo kutaal meel baabuurta la dhigto oo kutaal magaalada Reading ee dalka Ingiriiska. Qofka weerarka geystay ayaa toori la dhex qaaday dad ku sugnaa goobtaas oo ah meel lagu nasto.
Warbaahinta gudaha ee dalka Ingiriiska ayaa qoreyso in nin qoxooti ah oo kasoo jeedo dalka Libya, magaciisana ay ku sheegeen Khairi Saadallah lagu tuhunsanyahay inuu falkan ka danbeeyay.
Xigasho/kilde: Reading stabbings: Suspect revealed as Libyan Khairi Saadallah as police declare terror incident.
Previous articleTRUMP oo weeraray Ilhaan Cumar, mar kalena u gefay Soomaaliya
Next articleGermany: Nin soomaali ah oo xaaskiisa dilay.